Vaovao - Fandrakofam-baovao alokaloka
Izao no taonan'ny teknolojia avo lenta. Betsaka ny vokatra ampiasaina amin'ny fambolena, ary anisan'izany ny harato misy masoandro. Ny fampiasana harato masoandro dia manome fahafaham-po maro ho an'ny mpampiasa, ary ny tombony amin'ny harato masoandro dia misy ny fanoherana ny harafesina. Mahatohitra taratra sy maivana. Ary ny fandrakofana azy dia somary midadasika. Andeha hojerentsika ny fandrakofana shade net.
Ny harato alokaloka dia manana fampiasa isan-karazany ary azo ampiasaina amin'ny fiarovana sy fambolena karazan-jono sy fiompiana trondro isan-karazany, anana, taolan-tehezana, voninkazo, holatra azo hanina, zana-kazo, fitaovana fanafody, ginseng, ary reishi. Azo ampiasaina amin'ny indostrian'ny akoho amam-borona koa izy io. Ampiasao io. Amin'izay fotoana izay ihany koa dia azo ampiasaina ho fitaovana isan'andro ny harato fa tsy azo apetraka mivantana amin'ny tafo. Azonao atao ny mahita welder elektrika mitondra andry maromaro eo amin'ny tafo ary misintona ny harato manalokaloka mba hivezivezy ny rivotra eto ambany. Mieritreritra ny tafo Ny vokatry ny fampiasana harato alokaloka dia miharihary.
Hazavaiko ny karazana harato manaloka azo ampiharina, ary inoana fa hiitatra bebe kokoa amin'ny ho avy ny faritra azo ampiharina. Mazava ho azy fa mety hipoitra ny olana mandritra ny fampiasana. Raha te ho toy ny harato manalokaloka ianao amin'ny fanodinana, dia matetika mila mampiasa azy amin'ny fomba tsara ianao ary mitazona azy aorian'ny fampiasana. Ny fikojakojana dia fomba mahomby hanitarana ny androm-piainan'ny vokatrao.